မြောက်ပိုင်းဒေသ မှ အရိုးတွန်သံများ (အပိုင်း ၆ အောင်မိုးဝင်း) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Burma ARTICLES BY BERTIL LINTNER
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်နေ့သို့ ပေးပို့သော ဗီဒီယို ဖိုင် »
Source: မြောက်ပိုင်းဒေသ မှ အရိုးတွန်သံများ (အပိုင်း-၆-) (အောင်မိုးဝင်း) from the FB of Maung Maung Wann ?Nyi Nyi? there
ကိုထွန်းအောင်ကျော်အား ခေါင်းဖြတ်သတ် ခဲ့သော ကုန်း
မြန်မာ့သမိုင်းတွင် အရက်စက်ဆုံးလူသား ၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုထွန်းအောင်ကျော် အပါဝင် ကျောင်းသားပေါင်းမြောက်များစွာကို လူမဆန်စွာ သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ လူသတ်ရာဇ၀တ် ကောင်….သံချောင်း ( ခေါ် ) မြင့်စိုး..( သေဒဏ်၊ ယခုသာယာဝတီအကျဉ်းထောင် )၊ သံချောင်း ခေါ် မြင့်စိုးအား..နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းအပေါ် ပြင်းထံစွာ ရှုတ်ချ အပ်ပါသည်။ယုံကြည်ချက်တူသူများ အားလုံးဝိုင်းရှုတ်ချကြပါ.By: Maung Maung Wann
“ရော်နယ်အောင်နိုင် ရဲ့ အသံကို ကြားရတိုင်း ပါဂျောင်စခန်းမှာ ညှင်းဆဲ နှိပ်စက်ခံရတဲ့ အသံတွေကို ကြားနေရတယ်၊ သူ့အသံမှာ မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ရဲ့ အခိုးအငွေ့တွေ ရိုက်ခပ်နေတယ်” လို့ အသက်မသေပဲ ပြည်တွင်းကို ပြန်ရောက်သွားတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲဘော်ဟောင်းတွေက ရင်ဖွင့်ပြလေ့ရှိကြတယ်။ တကယ်တော့ ရော်နယ်အောင်နိုင် ဆိုတဲ့သူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် (၂၀) လောက်က မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ မတရားသဖြင့် စွပ်စွဲ သတ်ဖြတ် ခဲ့တဲ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူသတ်မှုတွေကို လူတွေမေ့ပျောက်လောက်ပြီ လို့ ထင်နေသလားမသိပါဘူး။ အသံလွှင့်ဋ္ဌာနတွေနဲ့ အင်တာဗျူးတဲ့အခါတိုင်း လူတတ်ကြီး လုပ်ပြီး သတိလက်လွတ် ပြောဆိုလေ့ရှိတယ်။ သူ့ရဲ့ အင်တာဗျုးတခုကတော့ မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူတွေအားလုံးကို မီးတောက်လောင်၊ ဒေါသထွက်စေခဲ့တယ်။ မှတ်မှတ်ရရ၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ လူသတ်သမား သံချောင်းတယောက် စစ်အစိုးရဆီကို လက်နက်ချပြီး ဝင်သွားတဲ့အခါ စစ်အစိုးရက သံချောင်းရဲ့ လူသတ်မှု၊ ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက် သေဒဏ် (၅) ခါ ချမှတ်ခဲ့တယ်။ ရော်နယ်အောင်နိုင်ကို ABSDF ( မြောက်ပိုင်း) နဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ အင်တာဗျုးလုပ်သူက မေးခွန်းတခု မေးတဲ့အခါ၊ သူက လူတတ်လုပ်ပြီး၊ “ ABSDF မှာ ရန်သူ့သူလျှို လို့ ယူဆသူအားလုံးကို သတ်ပစ်ရမယ် ဆိုတဲ့ မူ ရှိတယ်” လို့ ဖြေကြားခဲ့တယ်။ အထဲမှာ နားထောင်လိုက်ရတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲဘော်ဟောင်းတွေက သူ့ရဲ့အမေးအဖြေကို နားထောင်ပြီး ပါဂျောင်ဒေသဆီက မချမဆန့်အန်ထွက်လာတဲ့ ရဲဘော်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အော်သံတွေကို နာနာကျင်ကျင် ခံစားလိုက်ကြတယ်။ ရော်နယ်အောင်နိုင် ဆိုတဲ့သူက လူသတ်မှုကို မိန်ရည်ရှက်ရည်ထောက်ခံ ပြောဆိုနေတုံးပါလား ဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်လိုက်ကြတယ်။ ရော်နယ်အောင်နိုင်က ဘာလို့ ထင်ယောင်ထင်မှားကမ္ဘာမှာ ကိုယ့်ဘာသာလိမ်ချင်နေရတာလဲ။ တကယ်ဆို ထွန်းအောင်ကျော် ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မန္တလေးကတည်းက ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် ခဲ့တဲ့သူဖြစ်သလို၊ ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုလည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးတယ်မို့လား။
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ -အပိုင်း (၇) – မှာ နောက်ထပ် ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲဘော်၊ သက်သေ တယောက်ရဲ့ စာ ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။
Tags: All Burma Students' Democratic Front, Burma, Ethnic group, Maung Maung Wann, Non-governmental organization
This entry was posted on January 23, 2012 at 2:18 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “မြောက်ပိုင်းဒေသ မှ အရိုးတွန်သံများ (အပိုင်း ၆ အောင်မိုးဝင်း)”
January 24, 2012 at 6:13 am | Reply
ငရဲပွက်ပမာ သေဆုံးသူတို့၏ AB မြောက်ပိုင်းမှအရိုးတွန်သံများ ( ကဗျာ ).
by FB of Ko Baloi on Tuesday, January 24, 2012 at 4:19am
ဖြေသော် မပြေ- ချေသော်မကြေ ကမ္ဘာမကြေပဲ….ဟေ့းးးးးးးးးးး။။
( ဖြေသော်- မပြေ…..ချေသော်- မကြေ…..ကမ္ဘာမကြေ )